शिवरात्रिको अघिल्लो दिन भक्तपुरमा नयाँ महादेव!
शिवरात्रिको अघिल्लो दिन भक्तपुरमा नयाँ महादेव!
काठमाडौँ, फागुन १४ (सेतोपाटी) print
भक्तपुर गुण्डुस्थित पाइलट बाबा आश्रममा बुधबार शिवरात्रिको अघिल्लो दिन सोमनाथ महादेव मन्दिरको उद्घाटन भएको छ।
शनिबार सुरु भएको दशमहाविद्या महायज्ञको समापनमा दश महादेवीको प्राण प्रतिष्ठासहित सोमनाथ मन्दिर उद्घाटन गरिएको हो। नेपालमै पहिलोपल्ट सोमनाथ महादेव मन्दिरमा दश महादेवीलाई समेत प्रतिष्ठित गरिएको छ।
नेपाली गुरु हरिबाबाबाट चार दशकअघि मकवानपुरको भैँसेमा दीक्षित ७६ वर्षीय पाइलट बाबाले मन्दिर उद्घाटन गरेका हुन्। उनकै नाममा स्थापित आश्रम आँखारोग विशेषज्ञ डा. रामप्रसाद पोखरेल र उनकी पत्नी शोभना पोखरेलले आफ्ना गुरु पाइलट बाबालाई समर्पण गरेका हुन्।
सोमनाथ मन्दिर उद्घाटनकै अवसरमा विभिन्न आध्यात्मिक तथा अन्य २४ लेखकले लेखेको पुस्तकको संग्रह ‘आश्रम: ज्ञान, विज्ञान र प्रज्ञान’ सार्वजनिक गरिएको छ। अध्यात्म, धर्म, संस्कृति तथा दर्शनका विविध आयाममा लेखिएका रचना संग्रृहित पुस्तक पाइलट बाबा आश्रमले प्रकाशन गरेको हो।
क्याप्सन: भक्तपुर गुण्डुस्थित पाइलट बाबा आश्रम र सोही परिसरमा निर्मित सोमनाथ महादेव मन्दिर।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण १४, २०७० २१:३२:०२